Zụrụ Vintage Metal mgbachi Black / Red Women Handbags - Free Mbupu & Enweghị |tụ | WoopShop®
Vintage Metal mgbachi Black / Red Women Handbags
Agba Black Brown Red
Vintage Metal mgbachi Black / Red Women Handbags - Black na-azaghachi azụ ma na-ebu ụgbọ mmiri ozugbo ọ laghachiri na ngwaahịa.
Lining Ihe: Sịntetik Akpụkpọ anụ
Nọmba nlereanya: KS19-0419
Ime: Akpa ekwentị, Obere akpa mkpọchi
Dabere na 26 nyocha
ịdị mma Dị elu!!!
Ezi akpa, dị ka onyinye tinye eriri satin)
Obi dị m ụtọ na Akpa. Anyị nwere agha na mba ahụ.
Akpa ahụ dị jụụ, na-enweghị mmebi ọ bụla, enwere ntakịrị isi, echere m na ọ ga-ada. Gara ihe dị ka otu ọnwa na SFO, juru n'ọnụ nke ọma. Enwere ogologo aka, dị ka onyinye bụ rịbọn mara mma. Daalụ)
Yiri ka ibu na foto, dabara na nkọwa ahụ